ညမင်းသား: Men's Cancer Symptoms ယောက်ျား-ကင်ဆာ click
သီးသန့် ခံစားရတာတွေ ဖြစ်တယ်။ No.1 - Breast Mass ရင်သား အကျိတ် စမ်းမိသလား ယောက်ျားတွေမှာ ရင်သား-ကင်ဆာ မဖြစ်ပါဘူးထင်တာ မမှန်ပါ။ အဖြစ်တော့ မများပါ။ အကျိတ်သာမက အပေါ်ယံ အရေပြား ခွက်နေ-ချိုင့်နေတာ၊ နို့ထိပ်ဖျား အထဲဝင်နေတာ၊ နီရဲပြီး အရေပြား ခြောက်ကွာနေတာ၊ ထိပ်ဖျားက တခုခု ထွက်တာတွေ ရှိနေရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ No.2- Persistent Pain or Discomfort in Any Body Area ကိုယ်ခန္ခာ တနေရာရာမှာ မပြတ်တမ်း နာနေသလား လူတိုင်း အသက်ကြီးလာရင် ဟိုကဒီက နာကြမယ်။ နာနေတာ ကြာပြီ၊ ဘာမှန်းမသိဘဲ နာနေရင် ကင်ဆာလား စစ်ပါ။ ကင်ဆာက နာတယ်ဆိုတာ ရှားတော့ ရှားပါတယ်။ No 3. - Changes in the Testicles or Scrotum ကျားအစိ၊ ကပ်ပယ်အိတ်မှာ အပြောင်းအလဲ ရှိလာသလား Testicular cancer ကျားအစိ-ကင်ဆာက အသက် ၂ဝ နဲ့ ၄ဝ ကြား အဖြစ်များတယ်။ American Cancer Society အမေရိကန် ကင်ဆာ အသင်းက ယောက်ျားတိုင်း ပုံမှန်ဆေးစစ်တာထဲမှာ ဒီနေရာကိုပါ စစ်ဘို့ အကြံပေးထားတယ်။ တချို့ဆရာဝန်တွေကတော့ လတိုင်း ကိုယ့်ဖါသာ စမ်းကြည့်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရွယ်အစား၊ အကျိတ်၊ လေးလံနေတယ်ထင်တာ သံသယရှိရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ No.4- Changes in the Lymph Nodes တက်စေ့တွေ ကြီးနေ-ရောင်နေသလား လည်ပင်းနဲ့ ချိုင်းအောက်က တက်စေ့တွေ ကြီး-နာ-နီ-ပူနေသလား။ တခြားနေရာတွေမှာလဲ အဲလိုဖြစ်နေသလား။ အရင် ရှိနေတာက ပိုကြီးကြီးလာရင်၊ တလနေလို့မှ ပျောက်မသွားရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ No.5- High Fever ကိုယ်သိပ်ပူပြီး ဖျားသလား အပူချိန် > 103 F ကျော်ဖျားတာနဲ့ အဖျား တော်တော်နဲ့ မပျောက်ဖြစ်နေသလား။ ဘာလို့ ဖျားမှန်းမသိ ဖြစ်နေသလား။ တချို့ကင်ဆာတွေက ဖျားတတ်တယ်။ ဥပမာ Lymphoma (လင်ဖိုးမား) နဲ့ Leukemia (လူကီးမိးယား) တွေဖြစ်တယ်။ တနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ ကင်ဆာ နောက်တနေရာကို ပြန့်ရင် ဖျားတတ်တယ်။ No.6- Weight Loss Without Trying ကိုယ်အလေးချိန် ကျလာသလား တမင်တကာ ပိန်အောင် လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျလာတယ်ဆိုရင် သတိထားပါ။ No.7- Gnawing Abdominal Pain and Depression ဗိုက်နာပြီး စိတ်ဓါတ်ပါ ကျလာသလား ဒါဆိုရင် ဆေးစစ်ပါ။ Jaundice အသားဝါတာကော ရှိသလား။ No. 8 - Fatigue (Physical or Mental) စိတ်ရော လူပါ အားကုန်နေသလား ယောက်ျားတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာဆိုရင် ကင်ဆာ နဲ့ ဆိုင်နေတတ်တယ်။ ဥပမာ Leukemia (လူကီးမီးယား)၊ Colon cancer အူမကြီး-ကင်ဆာ၊ Stomach cancer အစာအိမ်-ကင်ဆာ။ No.9- Persistent Cough ချောင်းဆိုးနေတာ မပျောက်နိုင်ဖြစ်နေသလား ရက် ၃ ပါတ်ကြာတဲ့အထိ ချောင်းဆိုး မပျောက်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးစတဲ့ ဗိုင်းရပ်စစ် ဝင်တာ၊ တချို့ဆေးတွေ သောက်ရလို့ ချောင်းဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကြောင့်က မကြာခင် ပျောက်သွားမယ်။ Chronic bronchitis နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်တာ၊ Acid reflux အက်စစ်ရည် အထက်ဆန်တာ မဟုတ်ရင် ကင်ဆာ မဟုတ်တာ ဖယ်ထုတ်ဘို့ ဆေးစစ်ရမယ်။ No. 10 - Difficulty Swallowing အစာမျိုချတာ ခက်လာသလား အစာမာဖြစ်ဖြစ် အရည်ဖြစ်ဖြစ် မျိုချဘို့ ခက်လာတာ ကင်ဆာမဟုတ်တာ သိအောင်လုပ်ရမယ်။ Dysphagia ခေါ်တယ်။ Cancer of the esophagus အစာမျိုပြွန်-ကင်ဆာဖြစ်ရင် အဲလိုဖြစ်လာတယ်။ No. 11 - Changes in the Skin အရေပြား အပြောင်းအလဲတွေ သတိထားပါ အရောင် ကွဲပြား၊၊ အပါး-အထူ မတူဖြစ်လာသလား။ သွေးထွက်လွယ်လာသလား။ ငယ်ကတည်းကရှိနေတဲ့ မှဲ့က တမျိုးတမည် ဖြစ်လာသလား။ No. 12 - Blood in Sputum, Stool or Urine သလိပ်ထဲ၊ ဆီးထဲ သွေးပါလာသလား ချောင်းဆိုးရင်း သွေးပါသလား။ သွေးက တခါတလေ ချောင်းဆိုးရဖန်များလို့ မဆိုစလောက်ပါတာမျိုးက မဆိုးပါ။ သလိပ်နဲ့ ရောပါနေရင် TB တီဘီ မှ မဟုတ်ပါ Lung cancer အဆုပ်-ကင်ဆာကနေလဲ လာနိုင်တယ်။ ဆီးသွားတဲ့ထဲမှာ သွေးပါနေတာဟာ ကျောက်တည်တာကနေသာ မဟုတ် ကင်ဆာကနေလဲ လာနိုင်တယ်။ No. 13 - Mouth Changes ခံတွင်းအပြောင်းအလဲတွေ ရှိနေသလား ပါးစပ်မှာ အနာပေါက်တာ တော်တော်နဲ့ မပျောက်ဖြစ်နေသလား။ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ ဆေးငုံသူတွေဆိုရင် ပိုသတိထားပါ။ ပါးစောင်နေရာ လျှာတွေမျာ ထူးခြားတာ ရှိလာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ဖြူလာတာမျိုးကို Leukoplakia ခေါ်တယ်။ ကင်ဆာ မဖြစ်ခင်အဆင့်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ No. 14 - Urinary Problems ဆီးပြဿနာရှိ ပါသလား ဆီးခဏခဏသွားလာရတယ်။ ဆီးထွက်ဘို့ ကြာနေတယ်။ ဆီးသွားရတာ အားမရဖြစ်သလို ထင်နေမယ် စတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ “မိန်းမ မီး၊ ယောက်ျား ဆီး” ဆိုသလို အသက်ရလာတာနဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ ဆီးပြဿနာ ရှိလာတတ်တယ်။ အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ Benign prostatic hyperplasia (BPH) ဆီးကျိတ်ကြီးတာက ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ No. 15 - Indigestion အစာမကျေတာ ဖြစ်ပါသလား တခါတလေဖြစ်တာကိစ္စမရှိပါ။ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရင် ဆင်ခြင်ရတော့မယ်။ အစာမကျေတာကို တချို့က Heart attack နှလုံး (အတက်ခ်) ရတယ် ထင်ကြတယ်။ အစာမကျေတာက ဆက်တိုက်လိုဖြစ်လာရင် အစာမျိုပြွန်၊ လည်ချောင်း နဲ့ အစာအိမ် ကင်ဆာတွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Dr. တင့်ဆွေ ၁၁-၄-၂ဝ၁၂